Shinoa Light dia miorina tsara ny tranobe vy miakatra ho an'ny mpanamboatra birao sy mpamatsy | Vondrona mahazatra
Ilay manam-pahaizana momba ny fitokanana
10 Taona fanamboarana orinasa
Trano fananganana an'habakabaka
Tetikasa mavesatra mavesatra
Tranon-tsoratry ny trano fanatobiana trano indostrialy
Ny orinasan-trano fananganana vy dia mitaky firafitra vy ...
Trano fitehirizam-bokatra maivana SGS vita amin'ny maivana
Tetikasa fitehirizana mangatsiaka any Aostralia
Fanamboarana trano vita amin'ny vy vita amin'ny aloky ny tany
Rindran-tsoratry ny tranokala vy vita amin'ny marindrano marobe
Tetikasa mavesatra matevina
Ny trano fanamboarana trano vita amin'ny vatosoa Prefab
Jiro prevabricated avo avo fananganana vy vy ho an'ny birao
Ny bara vita amin'ny trano vita amin'ny vy mora vidy
Ny firafitra vita amin'ny vy vita amin'ny firafitra prefab
vidin'entana prefab tetikasa fitahirizana mangatsiaka Prefabricated trano Baoron'ny atrikasa vonjimaika firaketana trano fitehirizana trano
Welded H Fizarana na Hot nasiana fizarana H faritra, Q235, Q345
C Fizarana na Z Section, Q235
Roofina / Fametahana rindrina
Takelaka mipetaka, PU, ​​EPS, Tendrombohitra Rock, takelaka Sandwich Fiber
Fantsom-boloky boribory Q235
Q235 zoro vy, bara boribory na sodina vy
Tarika Baovao Loko
Sliding Sandwich Panel Door na am-baravarana mihidy
PVC / plastika vy / varavarankely vita amin'ny alumina
Bolts Manantona mafy, bolts mahazatra misy voanjo
Araka ny fangatahanao, ampidirina amin'ny 40'GP / OT, ​​20'GP, 40'HQ
Azontsika atao ny manao ny famolavolana sy ny teny nalaina arakaraka ny toe-javatra misy anao
1. Manana vondrona injeniera matihanina izahay, izay manana traikefa momba ny maritrano ny ankamaroany.
2. Niorina nandritra ny folo taona mahery, ny orinasanay dia nahazo traikefa isan-karazany amin'ny famolavolana, fanamboarana, fametrahana sy ny sisa. Ny mpiasa miasa dia manana fahaiza-manao tena tsara. Ny sasany tamin'izy ireo dia nanampy ny mpanjifa nametraka ny trano fitehirizam-bokatra eran'izao tontolo izao.
3. Izahay koa dia manana fitaovana vita amin'ny famokarana be dia be mihoatra ny 80 sy ao an-tokantrano, ao anatin'izany ny milina planeta gantry lehibe, milina fanantona arc automatique, milina fanangonana, slitter, milina fipoahana sy ny sisa.
4. Ankoatry ny fanamboarana araka ny takian'ny mpanjifa, dia nametraka andiana fitsipi-pamokarana koa izahay. Miaraka amin'ny teknika tonga lafatra, kalitao mendrika, vidiny mirary, serivisy ho an'ny kilasy ambony, dia nahazo ny mpanjifan'ny mpanjifa marobe an-trano sy any ivelany isika.
"Ny toetran'ny fitondran-tena dia manapa-kevitra amin'ny kalitao vokatra." no antoka ho antsika amin'ireo vokatra. "Mpanjifa cone aloha." no fitadiavantsika mandrakizay. Minoa ny safidinao, homena valiny mahafa-po izahay.
Previous: Trano fanamboarana trano fitaterana vy lehibe
Manaraka: Ny trano fanamboarana trano vita amin'ny vatosoa Prefab
Kronika Kely dia nomena anarana avy amin'ny "Pragmatism and Classic" ary naorina tamin'ny 2001. Rehefa taona nivoarana, ny vola isan-taona dia 2,6 miliara yuan ary voafetra 1.5 miliara yuan. M ahita velarana 540 000 000 metatra toradroa izy io ary atrikasa 260000 metatra tora-droa, faritra manorina 100000 metatra toradroa, mpiasa 2300 ary mpiasa teknika 500.
Amin'ny maha mpifaninana amin'ny sehatra iraisam-pirenena mifaninana amin'ny sehatra iraisam-pirenena, ny Vondrona Group dia iray amin'ireo tetik'asa mahomby indrindra any ivelany izay mahomby amin'ny orinasan'ny firafitr'i Shina. Manana ny mari-pahaizana ahazoana fifanekena tetikasa avy any ivelany. Manome serasera momba ny tetik'asa, drafitra sy famolavolana, fikarohana ary fampandrosoana, famokarana vokatra, fitaterana lozika, fametrahana fametrahana, serivisy ara-teknika ary serivisy fananganana injeniera feno ho an'ny tsena manerantany.
Ny mpiasan'ny varotra an-tserasera, arakaraka ny filàn'ny mpanjifa samihafa, ny fitantanana mpanjifa samihafa, amin'ny fizotran'ny fifandraisana amin'ny mpanjifa dia tsy maintsy mahatakatra ny hevitry ny mpanjifa mazava, mifampiresaka tsara, hialana amin'ny olana tsy ilaina noho ny fifandraisana tsy mety!
Fanamboarana vy azo itarina
Ireo firafitra fananganana vy
Trano vy vita amin'ny vy
Trano Prefab vy
Ny orinasan-trano fanamboarana vy no mitarika ny ...
The Group Group dia talen'ny mpanatanteraka eken'ny Fikambanan'ny Vondron-tsivana China China.
misoratra anarana amin'ny takelaka fanaovan-gazety
Avaratra andrefan'ny làlana Beihuancheng, Faritra fampandrosoana ara-toekarena, Yanzhou, Shandong, Sina